१२ सत्ताईस पत्रकार – बाह्रथरी कुरा
नेपाली पत्रकारितामा सबै पत्रकार एकातिर ऋषि धमला एकतिर राख्ने हो भने पनि धमलाकै पल्ला भारी हुन्छ। यीनको बिशेषता बयान गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग नै चाहिन्छ, हामी सक्दैनौं।
अन्य कुनै पत्रकार छुटे जस्तो लागेमा कमेन्टमा लेख्नुहोला।
8 thoughts on “१२ सत्ताईस पत्रकार”
Ramhari Subedi says:
पत्रकारहरूको बारेमा लेख्दा उदाहरणमा नाम सहित लेखिनुपर्थ्यो । नाम सहित नलेख्दा बाहिरबाहिर आरोप लगाउने भित्रभित्र साखुल्ले पल्टने प्रवृत्ति लेखमा पनि देखियो । जस्तै आलु पत्रकार भनेपछि आशिष लुइँटेल लेखेको भए के बिग्रन्थ्यो । पिआर पत्रकारमा अनन्त कोइराला, अनमोलको नाम लेखिदिएको भए केही जान्थ्यो ? हजुरहरू जस्तो निर्भिक ब्लग कर्मीहरूले डराएको कत्ति सुहाएन ।
12 खरी says:
सामान्य सेन्स नभएका पाठक नै हैनन् ।
लेख्नेचाहीं कुनमा पर्नुभो ?
Pingback: १२ सत्ताइस डाक्टर | बाह्रथरी कुरा
टीआर पोखरेल says:
खोइ त हामी कुन वर्गका पत्रकारमा परेम् भन्ने नै थाहा भएन । १२खरीको यो लेखमा त हामी जस्ता पत्रकारलाई कतै पनि स्थान नदिएर पत्रुकार पो बनायो । 😀 😀
khgendra karki says:
थाहा छैन कुन प्रयोजनको लागि यसरी पत्रकारको अपमानित कुरा लेखिएको हो । यसको कुनै अर्थ छैन । विभिन्न उपमा दिएर पत्रकारको वर्गीकरण गर्न सक्नेहरुले त्यसको निराकरण पनि गर्न सक्नु पर्दछ । उपमा दिएर आफ्नो पेशाको अपमान हुन्छ । सम्मान गर्न सकिँदैन भने अपमान गर्न पनि मिल्दैन । नेपाली पत्रकार रक्स्याहा छन, खानको लागि जान्छन्, एनजीओ आइएनजीओदेखि पार्टीको कार्यकर्ता भएर लेख्छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यद्यपि त्यसको निराकरणको लागि पत्रकार समृद्ध पत्रकार, आत्मनिर्भर पत्रकार, पेशा र व्यवसायको सम्मान गर्ने पत्रकार, जवाफदेही र जिम्मेवार पत्रकार बन्नुपर्दछ भन्ने विषयलाई प्रभावकारी रुपमा लिएर उनीहरुलाई आर्थिक रुपबाट, सामाजिक रुपबाट दर्बिलो बनाउने उपाय निकाल्ने हो भने कति गर्भिलो पेशा हुने थियो, १२ थरिका पत्रकारको उपमान आधाभन्दा बढी घटेर पक्कै जानेछ । अनि ऋषि धमलाले पनि लेखकलाई दानापानी दिएको भरमा चाकडी लेख्नुपर्ने भयो कि कसो ? नत्र ऋषि धमला पनि त्यही पत्रकार हो जसले उस्तै पत्रकारिता गरिरहेको छ भलै सानो र ठूलो मिडियाको पहुँचमा उ ठूलो र फराकिलो मिडियामा काम गर्ने अवसर पाएको छ त्यति मात्र हो ।
binu timsina says:
आफु चाहि कुन क्याटोगरीमा परियो नी ??
Pingback: हनुमाने, अनुमाने र जजमाने पत्रकार – बाह्रथरी कुरा